FUNDA NGOLUNYE ULWIMI Cakchiquel (Western) IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISilozi ISpanish Intetho Yezandla YaseAngola Intetho Yezandla YaseGhana Intetho Yezandla YaseIndia Intetho Yezandla YaseMalaysia Intetho Yezandla YaseMerika Intetho Yezandla YaseSlovakia Intetho Yezandla YaseVenezuela Intetho Yezandla yase-Ecuador Intetho Yezandla yaseBolivia Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseChile Intetho Yezandla yaseColombia Intetho Yezandla yaseCosta Rica Intetho Yezandla yaseCzech Intetho Yezandla yaseDatshi Intetho Yezandla yaseFilipi Intetho Yezandla yaseFinland Intetho Yezandla yaseFransi Intetho Yezandla yaseGrisi Intetho Yezandla yaseGuatemala Intetho Yezandla yaseHonduras Intetho Yezandla yaseHungary Intetho Yezandla yaseIndonesia Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseJamani Intetho Yezandla yaseJapan Intetho Yezandla yaseKorea Intetho Yezandla yaseNicaragua Intetho Yezandla yaseOstreliya Intetho Yezandla yaseParaguay Intetho Yezandla yasePersi Intetho Yezandla yaseRashiya Intetho Yezandla yaseRomaniya Intetho Yezandla yaseSpain Intetho Yezandla yaseTshayina Intetho Yezandla yaseZimbabwe Isi-Iban Isi-Ibanag Isi-Ibinda Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Irish Isi-Isoko Isi-Itali IsiAhanta IsiAja IsiAlbania IsiAlur IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAssamese IsiAttié IsiAukan IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBambara IsiBaoule IsiBashkir IsiBasque IsiBassa (SaseLiberia) IsiBassa (saseCameroon) IsiBatak (SaseDairi) IsiBatak (SaseKaro) IsiBatak (SaseSimalungun) IsiBatak (SaseToba) IsiBelize Kriol IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBislama IsiBoulou IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChangana (SaseZimbabwe) IsiChavacano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseZimbabwe) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChokwe IsiChol IsiChopi IsiChuabo IsiChuvash IsiCibemba IsiCinyanja IsiComorian (SaseNgazidja) IsiCreole SaseBissau Guinea IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseMauritius IsiCreole saseRéunion IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDamara IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDigor IsiDouala IsiDrehu IsiDusun IsiEfik IsiEmberá (SaseCatío) IsiEsan IsiEstonia IsiEwe IsiFante IsiFaroese IsiFiji IsiFinnish IsiFon IsiFrafra IsiFrentshi IsiGa IsiGalician IsiGarifuna IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuadeloupean Creole IsiGuarani IsiGuerze IsiGujarati IsiGun IsiGuna IsiGuéré IsiHausa IsiHebhere IsiHerero IsiHiligaynon IsiHindi IsiHiri Motu IsiHmong (White) IsiHuastec (SaseSan Luis Potosi) IsiHungary IsiHunsrik IsiJamani IsiJapan IsiJavanese IsiJula IsiKabuverdianu IsiKabyle IsiKannada IsiKaren (SaseS'gaw) IsiKazakh IsiKekchi IsiKhana IsiKhasi IsiKikaonde IsiKikongo IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinande IsiKinyarwanda IsiKipende IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKisi IsiKisii IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKpelle IsiKrio IsiKurdish Kurmanji (SaseCaucasus) IsiKwangali IsiKwanyama IsiKyangonde IsiLahu IsiLaotia IsiLatgalian IsiLatvia IsiLenje IsiLingala IsiLithuania IsiLomwe IsiLuganda IsiLugbara IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMacua IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMam IsiMambwe-Lungu IsiMangareva IsiManinkakan (SaseEastern) IsiMapudungun IsiMarathi IsiMarquesian (SaseHiva Oa) IsiMarquesian (SaseNuku Hiva) IsiMarshallese IsiMaya IsiMazahua IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMbukushu IsiMende IsiMeru IsiMiskito IsiMixe IsiMixtec (saseGuerrero) IsiMixtec (saseHuajuapan) IsiMizo IsiMongolia IsiMoore IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNahuatl (saseGuerrero) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNahuatl (saseNorthern Puebla) IsiNavajo IsiNdau IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNepali IsiNgabere IsiNgesi IsiNias IsiNiuea IsiNorway IsiNuer IsiNyungwe IsiNzema IsiOkpe IsiOromo IsiOssetia IsiOtomi (SaseMezquital Valley) IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPidgin (SaseCameroon) IsiPilagá IsiPolish IsiPonapea IsiPular IsiPunjabi IsiPunjabi (SaseShahmukhi) IsiPáez IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiQuiche IsiQuichua (IsiTena) IsiQuichua (SaseChimborazo) IsiQuichua (SaseImbabura) IsiQuichua (SasePastaza) IsiQuichua (SaseSantiago del Estero) IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiRomany (Macedonia) Cyrillic IsiRomany (SaseBulgaria) IsiRomany (SaseEastern Slovakia) IsiRomany (SaseNorthern Greece) IsiRomany (SaseSouthern Greece) IsiRomany (saseMacedonia) IsiRutoro IsiSamoa IsiSango IsiSaramaccan IsiSarnami IsiSena IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSomali IsiSranantongo IsiSunda IsiSusu IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTajiki IsiTalian IsiTamil IsiTandroy IsiTankarana IsiTarahumara (SaseMbindini) IsiTarascan IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiThai (SaseNortheastern) IsiTigrinya IsiTiv IsiTlapanec IsiToabaite IsiTojolabal IsiTok Pisin IsiTokelauan IsiTongan IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshwa IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTurkmen (SesiCyrillic) IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUdmurt IsiUighur (sesiCyrillic) IsiUkrainian IsiUrdu IsiUrhobo IsiUzbek IsiUzbek (NgesiRoman) IsiValencian IsiVenda IsiVezo IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWayuunaiki IsiWelsh IsiWolaita IsiXhosa IsiYacouba IsiYoruba IsiZapotec (saseLachiguiri) IsiZulu isi-Igbo isiGokana isiGuarani (saseBolivia) isiLow German isiWallisian isiWichi isiZapotec (saseIsthmus)
Ukususela kumaxesha akudala, uYehova ebefuna ntsapho nganye ichithe ixesha kunye ukuze ibe nolwalamano olusondeleyo naye nokuze isondelelane. (Duteronomi 6:6, 7) Yiloo nto ebangela ukuba amaNgqina kaYehova abe nexesha alibekela ecaleni veki nganye ukuze abe nonqulo lwentsapho—exubusha ngokukhululekileyo izinto zokomoya eziyichaphazela ngokukhethekileyo intsapho yabo. Enoba uhlala wedwa, unokuzibekela ixesha oza kulichitha noThixo ngokwenza ufundisiso.
Lixesha lokusondela ngakumbi kuYehova. “Sondelani kuThixo, naye uya kusondela kuni.” (Yakobi 4:8) Simazi kakuhle uYehova xa sifunda ngobuntu bakhe nangemisebenzi yakhe ekwiLizwi lakhe iBhayibhile. Indlela elula yokuqalisa unqulo lwentsapho kukuba nibe nexesha enilichitha kunye nifunda iBhayibhile ngokuvakalayo, mhlawumbi nilandele ucwangciso lofundo lweBhayibhile lweveki-ngeveki olukwiNtlanganiso Yobomi BamaKristu Nomsebenzi Wokushumayela. Lungu ngalinye lisenokufunda inxalenye ethile yeBhayibhile, lize libalise oko belikufunda.
Lixesha lokusondelelana njengentsapho. Amadoda nabafazi, abazali nabantwana, basondelelana ngakumbi xa befunda iBhayibhile kunye njengentsapho. Esi ifanele ibe sisihlandlo esimnandi nesizolileyo, esibangela ukuba lungu ngalinye lentsapho likhangele phambili kuso veki nganye. Kuxhomekeka kubudala babantwana, abazali basenokukhetha imixholo eza kunceda intsapho, mhlawumbi kwiMboniselo nakuVukani! Nisenokuthetha ngengxaki abantwana abaye bayifumana esikolweni nendlela yokuyicombulula. Kutheni ningabukeli inxalenye ekwi-JW Broadcasting (tv.jw.org/xh) nize niyixubushe kunye? Nisenokuqhelisela iingoma eziza kuculwa kwiintlanganiso, nize emva koko ninandiphe izimuncumuncu.
Eli xesha nilichitha kunye veki nganye ninqula uYehova njengentsapho, liya kuninceda nikunandiphe ukufundisisa iLizwi likaThixo yaye uya kuyisikelela imigudu eniyenzayo.—INdumiso 1:1-3.
Kutheni sibekela bucala ixesha lokunqula njengentsapho?
Yintoni enokwenziwa ngabazali ukuze yonke intsapho isinandiphe esi sihlandlo?
Cela amacebiso endlela yokuqhuba unqulo lwentsapho kwabanye abasebandleni. Kwakhona, khangela iincwadi ezikhoyo eHolweni yoBukumkani onokuzisebenzisa ekufundiseni abantwana bakho ngoYehova.
Indlela Yokwenza Intsapho Yakho Yonwabe
Uthando olwaboniswa nguYesu ngumzekelo onokuxeliswa ngabayeni, amakhosikazi nabantwana. Yintoni esinokuyifunda kuye?